Wararka – Welcome to the Somali Government Portal!
WARARKA MAANTA 28ka May 2022
Su’aalaha Maanta: Yaa loo soo magacaawi rabaa Raysal Wasaare cusub? Maxaase ka taqaanaa taariikh nololeedka Raysal Wasaaraha cusub ee la soo magacaabi rabo Haaji Dr. Badal Kaariye “Janno-gale”? Maxaad ka ogtihiin horumarka iyo mashaariicda uu ka wada gudaha dalka iyo dibadda? Yaa noqon doona raysal wasaare ku-xigeen? Goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa Raysal Wasaaraha cusub iyo ku-xigeenka?
Muqdisho 28ka Abriil 2022 Taliska Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay dileen 7 ka tirsan kooxda Al-Shabaab, ayna gacanta ku dhigeen labo kale, kadib howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen gobolka Shabeeladda dhexe.
Odowaa Yuusuf Raage, Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalkii ay ka sameeyeen agagaarka deegaanka War-ciise ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo ay ciidamadu ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo qalab ay wateen Al-Shabaab.
Odowaa oo la hadlay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed ee SNTV ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu soo furtay hub iyo lacag ay kooxaha Alshabaab ka qaadan jireen dadka deegaanka.
“Ujeedka howlgalkan ayaa ahaa mid looga hortagayo falalka argagixisanimo ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri Taliyaha oo intaa ku daray in la burburiyay saldhigyo dhowr ah oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi iyo sidoo kale maxkamado guurguura oo taliyuhu sheegay inay ahaayeen kuwa sharci darro ah oo ay shacabka ku dhibaateyn jireen.
Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada inkastoo ciidamada dowladda ay bilihii la soo dhaafay howlgallo ka dhan ah kooxaha Alshabaab ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobalada dhexe iyo koonfurta.
Muqdisho 28ka Abriil 2022 Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil qorsheysan oo xalay koox hubeysan ay ka geysatay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Dilka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in loo geystay Allaha u naxariistee Nabadoon Cali Macalin Maxamuud (Cali Dheere) oo ka mid ahaa waxgaradka deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya in rag ku hubeysan bistoolado ay toogteen marxuumka, xilli uu kusii jeeday gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Xaawo-Taako ee magaalada Beledweyne.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in kooxda dilka fulisay ay goobta isaga baxsatay waxaana meesha ay wax ka dhaceen gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya.
AUN Nabadoon Cali Dheere ayaa ka mid ahaa ergadii dhowaan wax kasoo dooratay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya.
Dhanka kale ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka Beledweyne oo ku aadan dhacdadaasi iyo howlgallada ay kadib sameeyeen ciidamada ammaanka.
Beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro qaraxyo iyo dilal qorsheysay oo ay fuliso kooxda Al-Shabaab.
Muqdisho 28ka Abriil 2022 Madaxii hore ee amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho Cabdiweli Maxamed Macow ayaa isbitaal ku geeriyooday lix sano kadib markii loo xiray kiis caalamka oo idil gaaray, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Muqdisho 28ka Abriil 2022 Xubno ka socday Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka ayaa maanta la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Cabdisaciid Muuse Cali ee dhawaan shaqada uu ka joojiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Arrimahaan ayaa imanaya kadib markii uu Rooble sharci darro ku tilmaamay shaqaalaha Wasaaradda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday laga soo bilaabo kowdii Janaayo 2022, uuna amray in shaqaalahaas dib loogu fasaxo howlahooda, dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen
Muqdisho 28ka Abriil 2022 Soomaaliya oo leh xeeb dhirirkeedu le’eg tahay 3,333 kilomitir kuna fadhida aag dhaqaale u gaar ah (EEZ, exclusive economic zone) oo ka badan hal malyan kilomitir oo isku wareeg ah ayaa ka mid ah goobaha ugu qanisan kalluumaysiga adduunka oo aan weliba si weyn looga faa’iideysan.
Masar 28ka Abriil 2022 Dacwad-oogaha guud ee Masar ayaa Jimchii amray in lasii daayo gabadha Soomaalida ah ee dishay nin Masri ah oo bajaaj ku waday kadib markii isku dayey inuu kufsado.
Waxay intaas ku dartay in qorshaheeda uu ahaa kaliya inay ninka dhaawacdo, si ay uga badbaado, balse nasiib-darro uu geeriyooday
HRW 28ka Abriil 2022Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Right Watch ayaa warbixin cusub kasoo saartay xasuuqii laba sano ka hor ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeelaha Dhexe, kaas oo lagu dilay illaa sideed qof oo ahaa shaqaale caafimaad.
WARARKA MAANTA 5ta May 2022
Su’aalaha Maanta: Yaa xaq u leh maanta inuu maamulo laamaha amniga iyo hoggaanka dalka? Maxaa ka khaldan Madaxweynihii hore ee xilka ka dhammaaday musharax Farmaajo “Been-Hawaas”” oo xaqiiqsaday inaysan mar dembe golaha shacabka iyo Ummadda Soomaaliyeed ku dooran doonin been iyo huuhaa 4 dekadood loogu yabooho #Ethiopia? Yaa maanta diidi kara inuu Farmaajo ka dhigay #Soomaaliya dalka ugu musuqmaasuqa badan 5 sanno ee la soo dhaafay xitaa xildhibaanadii matalayey deegaankiisa waxuu dhex dabaalsiiyey musuqmaasuq iyo jah-wareerin? Ha Wiqleyso!
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa joojiyey dhammaan go’aammada ku saabsan isbeddelada maamul iyo shaqaale ee Hay’adaha Dowladda, inta lagu guda jiro dhammeystirka doorashooyinka.Madaxweyne Farmaajo isagoo ka amba qaadaya xeerkaan ayaa wuxuu wax kama jiraan ku tilmaamay magacaabis iyo xil ka qaadis ay xukuumada raysal wasaare Rooble ku sameeysay agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada oo shaqada laga joojiyay, magacaabidda ku simaha Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, iyo agaasimaha Hay’adda Tayo Dhawrka Qaranka.
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Muqdisho 5t Guddoomiyaha aqalka sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo ah guddiga doorashada madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya.
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Xildhibaan Cabdicaziz Cilmi Cali oo kamid ahaa xildhibaanada kasoo jeedo Galmudug ee kuraastooda dad kale la siiyey haddana kamid ah Golaha badbaadada Galmudug ayaa eedeyn culus usoo jeediyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor).
“Waxaan halkaan isugu nimid anagoo mataleyno Galmudug, maadaama aan la baxnay oo aan u istaagnay howshaan runtii u baahan in loo istaago oo badbaadada Galmudug ah, waxaan isugu imaanay wixii nagu soo kordhay iyo wixii naga halaabayba inaan Bulshadeena la wadaagno,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdicaziz Cilmi Cali.
Cabdicasiis ayaa madaxweynaha Galmudug ku eedeyey inuu dayacay shaqadii iyo mas’uuliyadii loo dhibtay isla markaasna uu ku fashilmay sugidda amniga, isagoo Shacabka ugu baaqay inay tashadaan.
“Bulshadeena Galmudug waxaan dareensanahay in Abaaro ba’an weli hayaan Alle haka dul qaadee, sidoo kalana har iyo habeen ayaa waxaa ku socdo weerar, waxaana muuqata in maamulka Galmudug uusan diyaarin ciidamadii amniga sugi lahaa, waxaana ku baaqeynaa in Bulshada Galmudug ay isku tashadaan si ay ammaankooda u sugtaan garabna u siiyaan walaalahooda tabaaleysan,” ayuu sii raaciyey hadalkiisa.
Sidoo kale Cabdicasiis ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka Galmudug inay si sax ah ula xisaabtamaan madaxweyne Qoor Qoor oo uu ku eedeeyey inuu Muqdisho ka wado ololaha dib usoo doorashada Farmaajo xilli deegaanada uu madaxda u yahay ay halis uga imaaneyso kooxda Al-Shabaab.
“Xildhibaanada maamul Goboleedka Galmudug waa inay la xisaabtamaan madaxda talada heysa oo uu Axmed Qoor Qoor ugu hooreeyo kaasoo kaambeyn u fadhiyo Xamar, iyadoo ay bulshadiisa dayacan tahay, waxaa nasiib darr ah runtii oo wax taariikhdu qoreyso ah in Abaarta jirta iyo amni darada jirta aysan xanuun iyo kuluul midna ku heyn madaxweynaha Galmudug, xanuunka ugu badan ee Maanta hayo waa Ahlu Sunna markii loo sheego in Al-Shabaab soo weerartay deegaanada wuxuu ku jawaabayaa amaa Bohol laga soo dhaqaaqay,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Ugu dambeybti xildhibaan Cabdicasiis ayaa yiri “ Waxaa sidoo kale siyaasiyan khasaaro ku ah ummadda kasoo jeedo Galmudug inaysan heysan madaxweyne ka fakaraya aayahooda waxaana taas tusaale kuugu filan in Galmudug ay weysay hoggaanka labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ku jebinayo go’aano horay uga soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble.
Xeerkan Madaxweyne wuxuu baabi’inayaa isbeddelada maamul ee lagu sameeyay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Ku-simaha Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo Hay’adda Tayo Dhawrka Qaranka.
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Safiirkii Safaradda Soomaaliya ee dalka Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku sharaxayo sababta uu ku yimid khilaafka u dhaxeeya asaga iyo wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali, oo sheegay inuu xilka ka qaaday, wuxuuna Safiirku eedeymo culus u soo jeediyey wasiirka.
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa weli kulamo ka wada magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kuwaas oo looga hadlayo dhammeystirka doorashada.
Aadan Madoobe ayaa xalay qaabilay madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoor Qoor oo booqasho ugu tegay.
Kulanka wuxuu ujeedkiisu ahaa salaan iyo hambalyo, waxaana uu Eebbe uga baryey in uu u fududeeyo xilka culus ee loo doortay.
Sidoo kale Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa hoygiisa ku qaabilay ku-xigeenka Ra’iisul Wasaaraha dalka mudane Xildhibaan Mahdi Maxamed Guleed.Labada mas’uul ayaa waxa ay ka wada hadlay marxaladda kala guurka ah ee doorashada dalka.
Raiisul Wasaare ku xigeen, Xildhibaan Mahdi Guleed oo u hambalyeeyay Guddoonka Baarlamaanka 11-aad ayaa waxa uu sidoo kale bogaadiyay dadaalada socda ee looga gol leeyahay dhameystirka doorashooyinka iyo soo af-jaridda marxaladda kala guurka.
Muqdisho 5ta Abriil 2022 Xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo kala gooni gooni ah oo ay Maanta yeesheen waxaa ay iska soo xuleen guddiga qaban qaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Xubnaha ka socda Golaha Shacabka ayaa waxaa ay yihiin
#Somalia #Soomaaliya #Wararka #Warar #warka #News
WARARKA MAANTA 26ka Abriil 2022
Su’aalaha Maanta: Yaa maray in la khaarajiyo Guddoomiaha Ku-Mel-Gaarka Goalaha Shacabka Mudane Dhabanacad? Yaase qabqabtay askartii Hay’adda Nabad-Sugida Iyo Sirdoonka Qaranka #NISA ee khaarajin rabtay Guddoomiaha Ku-Mel-Gaarka Goalaha Shacabka Mudane Dhabanacad? Yaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya 2022? Ma waxaa madaxweyne loo dooran karaa Deni oo ishii dhaqaalaha Dowladda #Puntland si ula kac ah u burburiyey asgaoo kumanaan ka qixiyey #Boosaaso? Mise waxaan madaxweyne u dooranaa Xassan Shiikh Maxamuud oo dhulkii hantida dadweynaha ku takrifalay oo ka iibeyey shirkaddo qaarkood ku caddeeyey heshiiska looga iibeyey dhulalkaas hantida dadweynaha ah inaysan qof Soomaali ah ka dhex shaqayn karin? Mise Ma waxaan dooraan Madaxweyne Farmaajo “Been-Hawaas” oo aan waxba qaban muddadii uu xilka hayey asagoo 4 dekadood ugu siiyey Ethiopia? Ha wiqleyso!
Muqdisho 26ka Abriil 2022 Guddoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka Cabdisalaan Axmed Dhabancad ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta uu xalay u dhaariyey xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
16-ka xildhibaan ee lagu soo doortay Ceelwaaq, goobjoogna ay ahaayeen xubno ka socda guddiga heer federaal ee FEIT, waxaa barbar socday doorashada 16 kale oo kooxda Farmaajo ay ku soo dhistay Garbahaarey, kuwaas oo doonaya in lagu biiriyo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Gudoomiye Dhabancad ayaa sheegay in sababta xildhibaanada Ceelwaaq uu u dhaariyey ay tahay inay siteen shahaadooyinkii rasmiga ahaa ee guddiga doorashooyinka heer federaal ee FEIT.
“Xildhibaanada aan dhaariyey waxaan ku dhaariyey cadeymahooda oo waxay wataan shahaadadii saxda aheyd ee guddoomiyaha guddiga FEIT Muuse Geelle uu soo siiyey, waaxay lamid tahay shahaadadii aniga la i siiyey oo la igu dhaariyey, la iguna aqoonsaday,” ayuu yiri Guddoomiye Cabdisalaan Dhabancad.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ninkii shahaadadaas wata hadii uu u diido baarlamaanka aysan tiisu sax ahaa doonin, “Waxaan rumeystay inay wataan saxiixii Muuse Geelle Yuusuf, gudoomiyaha FEIT,” ayuu yiri.
Guddoomiye Dhabancad ayaa sheegay in xildhibaanada ay fasax u diideen iyadoo lagu jiro 10-ka dambe ee Ramadaan, si loo dedejiyo doorashadaan labada sano jiitameysay.
“Go’aankeenu wuxuu ahaa in 8-cisho aan doorashada ku soo koobno oo baarlamaanka ku wareejino guddoon rasmi ah, si xildhibaaanada dhiman aan u dhaaro waxaa nalo diiday meelo badan, waxaana noo diiday saraakiisha Booliska,” ayuu hadalkiisa ku sii daray guddoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka.
Guddoomiye Cabdisalaan Dhabancad oo sii hadlayey wuxuu yiri, “Markii ugu dambeysay ee aan Hotelka tagnay xabad ayaa lagala daalay goobtii aan ku sugneyn, ma garano ninkii hotelka lahaa cid u gudi doonta burburkii loo geystay, waxaas oo dhan waxaa loo sameynayaa yaan dowlad la dhisin, waxaan moodayey in la bislaaday, laakiin dhibku waa sii badanayaa.”
Sidoo kale guddoomiye Dhabancad ayaa wacad ku maray in weerarrada iyo jid gooyada loo dhigayo doorashada aysan cabsi geli doonin oo doorashooyinka dalka ay deg deg u dhameystiri doonaan, si maalmaha soo socda uu dalku u yeesho baarlamaan rasmi ah oo guddoonkiisa lasoo doortay.
Jubbaland 26ka Abriil 2022 Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa nasiib darro ku tilmaamay qorshayaasha Madaxweynaha xilkiisu dhamaaday uu ku carqaladaynayo doorashooyinka dalka.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in ficilladaas uu u dambeeyey weerarkii xalay lagu qaaday Gudoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabancad oo ka qeyb-galayay munaasabada dhaarinta Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo laga soo doortay Jubbaland.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku goodiyey in lagula xisaabtami doono sarakiisha amniga ee fulinaya amarada sharci darada ah ee kasoo baxaya Madaxweynaha xilku ka dhamaaday, kuwaas oo lagu fashilinayo doorashooyinka gaba gabada maraya.
“Madaxweynuhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagan Xildhibaanada baarlamanaka iyo gudoonkooda KMG ah si dalka looga saaro marxaladan adag isla markana ay indhaha ku hayaan qorshayaasha lagu curyaaminayo in dalka ay ka dhacdo doorashooyinka gaba gabada maraya taas oo masuuliyadeeda ay qaadayaan saraakiisha ciidamada iyo Madaxweynaha xilku ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Axmed Madoobe.
Sida ay ogaatay Caasimada Online waxaa la qabtay askar weerartay oo dooneysay inay dilaan guddoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabancad, xilli uu ku howlanaa dhaarinta xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo
Muqdisho 26ka Abriil 2022 Sida ay ogaatay Caasimada Online waxaa la qabtay askar sida la sheegay dooneysay inay dilaan guddoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka Cabdisalaan Dhabancad, xilli uu caawa ku howlanaa dhaarinta xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Muqdisho 26ka Abriil 2022 Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa jawaab ka bixiyey qoraalkii xalay kasoo baxay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ee uu ku sheegay inaysan dhaqangal aheyn wareegto kasta oo uu soo saaray ku-xigeenkiisa.
Muqdisho 26ka Abriil 2022 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Geneva kula kulmay ergayga gaarka ah ee Dowladda UK u qaabilsan Geeska Afrika iyo Badda Cas Danjire Philip Parham.
Kulankaan ayaa Ra’iisul Wasaaraha iyo Ergayga dhex maray ka hor shirka heerkiisu sarreeyo ee looga hadlayo abaaraha ka jira Geeska Afrika, kaas oo berri ka furmaya Geneva Switzerland.
Muqdisho 26ka Abriil 2022 Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa lagu wadaa in maanta ay ka dhacdo doorashada guddoomiyaha cusub ee Golaha Aqalka Sare iyo labadiisa ku xigeen, taas oo lagu qabanayo Teedhada Afisyoone oo ku dhex taalla xerada Xalane.
WARARKA MAANTA 19ka Abriil 2022
Su’aalaha Maanta: Ma ogtihiin inay suurtagal tahay inuu Mudan Maaxay noqon doonaa Madaxweynaha #Soomaaliya 2022? Maxaadse ka taqaanaan Musharax Madaxweyne Maaxay? Yaa #Soomaaliya madaxweyne u dooran doona Madaweynaha Maamul Gobaleed #Puntland ku fashilmay Saciid Deni? Maxaadse ka ogtihiin khasaaraha iyo burburka uu ka sameeyey magaalada Boosaaso ee dakhliga dowladda Puntland 96% bixisa iyo intii uu dad ka qixiyey? Ha wiqleyso!
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Waxaa Maanta oo Talaado ah lagu wadaa iney si toos ah magaalada Muqdisho uga bilaabato diiwaan gelinta Musharaxiinta dooneysa iney u tartamaan guddoonada Aqalka sare iyo kan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Fedaraal Soomaaliya. Sida ku cad jadwalkii shalay ay soo saareen guddiyada qaban qaabada doorashada labada gole oo aheyd in 19-ka bishaan April ay bilaabaneyso diiwaan gelinta Musharaxiinta dooneysa u tartamida guddoonada labada Aqal iyo labadiisa ku xigeen.
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Madaxweynaha Puntland oo ay wehliyaan xildhibaanno katirsan labada aqal ee barlamaanka oo deegaan doorashadoodu tahay Puntland, ayaa gaaray magaalada Muqdisho.Madaxweyne Deni oo u sharraxan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan macsalaamayn la qaatay barlamaanka Puntland iyo madaxweyne ku xigeenkiisa.
Muqdisho 19ka Abriil 2022Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna murashax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa Axadii shalay dib ugu soo laabtay magaaladaMuqdisho kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shariif iyo xubno ka tirsan mucaaradka waxay ka mideysan yihiin inay ku taageeraan codkooda Sheekh Aadan Madoobe oo u sharaxan guddoomiyaha golaha shacabka, islamarkaana xilkan horey usoo qabtay iyo Cabdi Xaashi oo AqalDhinaca kale, kulamadaasi ayaa waxaa barbar socday ololaha murashaxnimada Shariifka ee madaxweynaha soo socda.
ka Sare ay la doonayaan mucaaradka iyo ra’iisul wasaare Rooble.
Muqdisho 19ka Abriil 2022 G/Sare Cabdullahi Aadan Warfaa oo ah taliyaha ciidamada guutada Gedo ee militeriga Soomaaliya ayaa ka jawaabay eedeymihii uga yimid guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cusmaan Nuur Xaaji Macalimuu.
Gaashaanle Sare Cabdullahi Aadan Warfaa oo BBC la hadlay ayaa iska fogeeyey eedeynta ah in xalay uu gurigiisa ku wareeray guddoomiye Ma“Macalimuu nin sarkaal ah waaye oo ciidanka aan madaxda u ahay ayuu ka tirsan yahay, marka cidna ma weerarin ee taleefan hala iigu geeyo ayaan iri, si aan ula hadlo,” ayuu yiri, Taliyaha ciidmaada guutada 10-aad ee gobolka Gedo.
Taliye Warfaa ayaa intaas ku sii daray in Macalimuu uu kala hadli rabay arrimaha siyaasadda ee uu Facebook-giisa ku qoro, maadaama uu yahay sarkaal ciidan, ciidankana ay mamnuuc ka tahay ka hadalka siyaasadda
calimuu, balse wuxuu qirtay inuu xubno saraakiil ah u diray.“War siyaasadda maxaa ku geliyey nin ciidan ah ayaa tahaye inaan dhaho ayaan rabay, seddax sarkaal ayaan u diray, kadib markii aan talefankiisa waayey, sarkaal aan ku kalsoonahay ayuuna ahaa, hadii la weerarayna dhimasho iyo dhaawac ayaa meesha ka dhici lahaa, balse warkaas waa been,” ayuu yiri Taliye Cabdullahi Warfaa.
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Madaxweynaha mudo xileedku ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geerida Allaha u naxariistee, Abwaan Beddel Jaamac Xirsi oo caawa lagu dilay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgallo qorsheysan oo ciidamada Xoogga dalka dalka, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran Danab ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Mudug.
Ujeedka howlgalladan ayey saraakiisha ciidamada Danab ku sheegeen in looga hortegayo weeraro ay had iyo jeer Al-Shabaab kasoo abaabulaan deegaanada ay ka joogaan Mudug
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa shaacisay inay tahay murashax u taagan kuriga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka baarlamanka federaalka Soomaaliya.
Kursiga xildhibaanad Khadiija ay ku dhawaaqday inay u tartameyso ayaa waxa la rumeysan yahay inuu yahay midka uu sida aadka ah u doonayo Fahad Yaasiin oo weli aanu helin shahaadada xildhibaannimo.
Khadiija Maxamed Diiriye ayaa qoraal ay soo saartay boggeeda Facebook waxay ku shaacisay murashaxnimadeeda, iyadoo tiri “Kadib markaan talo soo jeedinta saaxiibadeeyda siyaasadda aan ku tolloownay anigoo dareensan in hore loo dhaqaajiyay doorashada golaha shacabka BJFS waxaa lacaga bilaabo caawo soo bandhigayaa murashaxnimadayda guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad”.
Khadiija iyo Fahad Yaasiin ayaa aad isugu dhow, waxaana la ogeyn in tallaabada ay ku shaacisay murashaxnimadeeda inay tahay siyaasad iyo in Fahad ka quustay inuu helo kursiga laga hakiyey, sidaasi darteedna uu u arkay in Khadiija Maxamed Diiriye booskii uu banneeyay inay buuxiso.
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa caan ku ah is rog-rogga siyaasadeed waana sababta keentay inay shan jeer soo gasho baarlamaanka, iyadoo xiligaan ay ka mid tahay taageerayaasha Villa Somalia.
Doorashadii baarlamaanka 11-aad ayey sidoo kale waxay ka mid aheyd murashaxiintii aadka loogu saadaalinayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad, iyadoo cododkii ay heshay ugu shubtay Cabdiweli Ibraahim Muudeey.
Dhinaca kale, waxaa xilkaan isu soo taagay Xildhibaan Maxamuud Cabdulqaadir Jeego iyo Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caana-Nuug), kuwaasi oo shaaciyay inay u taagan yihiin tartanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka.
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Marxuum Abwaan Beddel Jaamac Xirsi oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Soomaaliyeed, kaas oo xalay lagu dilay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Muqdisho 19ka Abriil 2022 Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta si rasmi ah u guda gashay dhageysiga dacwadda uu u gudbiyey la-taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin, taas oo la xiriirta kursiga loo doortay ee HOP086, kadib markii uu hakiyey FEIT.
Hoolka ay ka socoto dooda ayaa ah mid firaaqo ah, waxaana la xadiday dadka ka qeyb-galaya dhageysiga dacwddaan oo ah mid xasaasi ah, marka laga reebo qareennada difaacaya Fahad, kuwa u doodaya guddiga FIET iyo guddoonka maxkamadda sare ee dalka.
Guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed ayaa soo xiray fadhigga maanta, wuxuuna sheegay inay maxkamaddu dib ka soo saari doonto qaraar ku aadan kursigaasi
WARARKA MAANTA 18ka Abriil 2022
Su’aalaha Maanta: Yaa manta amray in foodo iyo qas laga dhex abuuro barlaamaanka cusub “Farmaajo Been-Hawaas”? Yuu Raysal Wasaare Mudane Maxamed Xuseen Rooble u magacaabi rabaa taliyaha cusub ee Hay’adda Nabad-Sugida #NISA? Yaa madaxweyne ka noqon doona #Soomaaliya Raysla Wasaarihii horeMudane Xassan Cali Kheyre ama Madaxweyniii hore Mudane Xassan Shiikh Maxamuud? Maxaa ka cusub #Soomaaliya? Maxaadka ogtihiin inuu soo noqon rabo Madaxweynihii hore Mudane Xassan Shiikh Maxamuud “Garguurte”? Maxayse rabtaa inay madaxtooyadda #Soomaaliya samayso? Ha wiqleyso!
Muqdisho 18ka Abriil 2022 Labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya Kulan wadajir ah oo looga arrinsanayo ansaxinta wax ka badelka Habraaca ku-meel-gaark ah ee Doorashooyinka Guddoonka labada Gole iyo Madaxweynaha.Guddiyada qabanqaabada doorashada guddoonka ayaa shalay yeeshay kulankii ugu horreeyay oo ay kaga wada hadleen xeerka doorashooyinka guddoonka labada gole iyo madaxweynaha.
Muqdisho 18ka Abriil 2022 Taliska ciidanka Booliiska Degmada Dharkenleey ee gobolka Banaadir ayaa howlgalo ay ka sameyeen gudaha xaafadaha degmadaasi oo lagu bartilmaameedsanaayay ciyaal weero dhibaato xoogan ku haya shacabka degan xaafadaha degmada Dharkenley.Taliska ciidanka Booliiska Degmada Dharkenleey ee gobolka Banaadir ayaa howlgalo ay ka sameyeen gudaha xaafadaha degmadaasi oo lagu bartilmaameedsanaayay ciyaal weero dhibaato xoogan ku haya shacabka degan xaafadaha degmada Dharkenley.
Muqdisho 18ka Abriil 2022 Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Daa’uud Cadar Cilmi oo ahaa wiil dhalinyaro ah, kuna shaqeysanayey mootada nooca Bajajta, kadib markii uu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Marxuumka ayaa waxaa xilliga Afurka ee shalay gelinkii dambe lagu dilay Aargada Dayniile, isaga oo Sooman isla-markaana socday xaafaddiisa, si uu uga soo afuro.
“Daa’uud Aabihiis bil-buu duugan yahay hadda dhow ayuu dhintay aniga hadda Asaay ayaa ii saaran. Sideed caruur ah oo isugu dhalay iyo sideed kale oo aan aniga dhalay oo isagu u dhaq-dhaqaaqayey ayaa ku nool meeshaan marka xaq darro ayaaSidoo kale Hooyadan oo ay ka muuqatay tiiraanyo ayaa baaq u diray dowladda, gaar ahaan ra’iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxayna ka codsatay in cadaalad loo helo wiilkeeda, maadaama uu baxsaday askarigii dilay.
lagu dilay,”ayey tiri “Waxaan codsaneynaa ninkaas dadkii xaq darrada ku dilay dadka ay quseysay oo ra’iisul wasaaraha leh oo madaxweyne leh oo guddoomiye leh inaan cadaalad helno. Cadaalad ayaan u baahanahay dad maras ah ayaa nahay isagaa noo dhaq-dhaqaaqayey aniga waayeel ayaan ahay” ayey markale tiri Hooyada dhashay Marxuum Daa’uud Cadar Cilmi.
Muqdisho 18ka Abriil 2022 Taliyaha ku-meel gaarka ah ee hay’adda NISA Yaasiin Farey ayaa la filayaa inuu xilka ka dego marka uu maro dhaarta xildhibaan, waxaana xog aan helnay ay sheegeysaa in lagu beddeli doono sarkaal ka tirsan NISA oo beel ahaan kasoo jeeda beesha Absame
Warar ay heshay Caasimadda ayaa sheegaya in magacaabista Taliyaha NISA todobaadkii hore dib loo dhigay iyo in Yaasiin Farey uu xilka wareejiyo sababo la xiriira cabsi laga qabay diidmo iyo khilaaf hor leh inuu ka dhex abuuro Villa Somalia iyo ra’iisul wasaare Rooble.
Muqdisho 18ka Abriil 2022 Ilo wareedyo xog ogaal ah oo ku dhow Villa Somalia ayaa Caasimadda u xaqiijiyey in maalinta Talaadada ah ee 19-ka bishaan ay Maxkamadda Sare ee dalka qaadi doonto dacwadda kiiska kursiga Fahad Yaasiin.
Todoba maalmood ka hor Maxkamadda Sare ayaa soo saartay qoraal ay ku wargelisay Garyaqaanka guud ee dowladda inuu muddo laba maalmood gudahood ah kaga soo jawaabo gal-dacwadeedkan laga soo gudbiyey guddida doorashada ee heer federaa
Muqdisho 18ka Abriil 2022 – La-taliyaha amniga Qaranka madaxweyne Farmaajo, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa farriin adag oo diidmo ah kala kulmay garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya, kaasoo la filayey inuu dhankiisa ka riixi doono in la guda galo dacwada kursiga HOP#086.
Fahad Yaasiin ayaa asbuucii hore qabsaday qareen dacwad ka gudbiya guddiga doorashada ee FEIT kaas oo kursigiisa ka reebay kuraastii la doortay ee Golaha Shacabka.
Fahad wuxuu aaminsanaa inuu dhinaca sharciga ku xoog badan yahay halkaasna uu kursigiisa fasax deg deg ah kasoo heli doono, laakiin waxaa muuqata in dhinaca ay is hayaan ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha inay shaqo adag ka qabteen dhanka garyaqaanka guud.
Xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Sabtidii qoraal u diray maxkamadda sare ee dalka ayaa ayiday hakinta lagu sameeyey kursiga HOP#086 ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaas oo uu hakiyey guddiga doorashada ee FEIT.
Xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federal inay hakinta kursiga HOP#086 u mareen habraacii saxda ahaa ee loogu talagalay fulinta doorashada.
Garyaqaanka guud ee Dowladda ayaa sidoo kale difaacay awoodda iyo sharciga guddiga doorashada, wuxuuna sheegay in guddiga ay awoodiisu tahay inuu mas’uul ka yahay guud ahaan kormeerka iyo xaqiijinta hannaanka doorashada.
Muqdisho 18ka Abriil 2022 Sida ay Caasimada Online u sheegeen xubno ka tirsan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa la filayaa in maanta ay fowdo ka dhacdo xarunta baarlamanka federaalka, ayada oo ay isku hayaan xildhibaano iska soo horjeeda.
WARARKA MAANTA 16ka Abriil 2022
Su’aalaha Maanta: Maxaad ka ogtihin fashilka Madaxtooyadda #Soomaaliya kajira? Maxay tahay sababta uu Madaxweynihii hore Mudane Farmaajo u diiday inuu ka soo qaybgalo dhaartii xildhibaanada cusub? Yaa beenta iyo fashilka Madaxweynihii hore Mudane Farmaajo qarin doona? Yaa #Soomaaliya Madaxweyne ka noqon doona Raysal Wasaare Mudane Maxamed Xuseen Rooble ama Madaaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo “Been-Hawaas”? Maxaa fashilay in uusan dhicin wax afgabi ah? Yaase masuul ka noqon doona doorashada iyo qabashadeeda? Yaa tanaasuli doona oo masuul ka noqon doona fashilka iyo hoggaan xummada ka dhex jirta dowladda wakhtiga ku dhammaatay Madaxweyne Farmaajo? Ha wiqleyso!
Muqdisho 16ka Abriil 2022 Ruushka ayaa dalkiisa ka mamnuucay Ra’iisul Wasaare Boris Johnson iyo wasiirro kale inay soo galaan Moscow, sababo la xiriira mowqifka UK ee dagaalka Ukraine.
Muqdisho 16ka Abriil 2022 Soomaaliya ayaa loo doortay in ay noqoto Guddoomiyaha Ururka Horumarinta Beeraha Carabta ee Jaamacadda Carabta labada sano ee soo socota.
Muqdisho 16ka Abriil 2022 Xildhibaanada cusub ee labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay kulankooda ugu horreeya ku yeeshaan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kaas oo looga hadlayo arrimo dhowr ah.
Guddoomiyaha KMG ah ee Golaha Shacabka, Cabdisalaan Dhabancad oo ka hadlay kulanka ay maanta yeelanayaan ayaa sheegay inay dadajin doonaan howlaha shaqo ee hor yaalla
Muqdisho 16ka Abriil 2022 Ururka Midowga Afrika ayaa haatan ku howlan sidii loo beddali lahaa Wakiilka Ururkaas u qaabilsan Soomaaliya, Francisco Madeira oo uu dhowaan dalka ka ceyriyey ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya.
Ujeedka ayaa lagu sheegay in Midowga Afrika uu doonayo, sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay eryidda Danjirahooda u qaabilsanaa SoomaaliWarbixinta ayaa sidoo kale muujineysa in ninkan lagu beddalayo Maman Sambo Sidikou oo u dhashay dalka Niger.
Hargaysa 16ka Abriil 2022 Magaalada Hargeysa waxaa maalintii afaraad ku xiran illaa 13 Wariye oo ay dhowaan xabsiga dhigeen ciidamada Booliska Somaliland, kadib dhacdadii xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa.
Wariyeyaashan oo ka howl-gala warbaahinta qaybaheeda kala duwan, sida Telefishinno iyo Idaacado ay ka mid ah BBC-da ayaa saaka kasoo muuqday maxkamadda Hargeysa.
Wararka ayaa sheegaya in maxkamaddu ay amar kasoo saartay xarigga Wariyeyaashaasi, isla-markaana ay amartay xabsiga lagu sii heyn doono illaa 5 cisho oo dheeraad ah.
Booliska ayaa doonaya in 5-taasi maalmood uu kusoo dhammeystiro caddeymahooda, si maxkamaddu ay go’aan rasmi ah uga soo saarto xariga Suxufiyiintaasi.
Maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay saraakiisha Booliska in dhaqtar la geeyo Wariye Maxamed Ilig oo ka mid ah Wariyeyaasha xiran, kadib xaalad caafimaad oo soo wajahday.
Sidoo kale Wariyayaashan ayaa waxaa la filayaa in shantaasi maalmood ka dib lagu soo celiyo maxkamada, si loo dhammeystiro dacwadda loo heesto. Arrintan ayaa Somaliland waxa ay kala kulantay cabmbaareyn xoogan oo ka timid Ururka Suxufiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka ee ka jira maamulkaasi.
Si kastaba, Somaliland ayaa waxaa caadi ka noqday xariga lagula kaco Wariyeyaasha, Fanaaniinta, Siyaasiyiinta iyo cid kasta oo kasoo horjeesata xukuumadda maamulkaasi
Muqdisho 16ka Abriil 2022 Guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cabdisalaan Axmed Dhabancad ayaa magacaabay Guddiga qaban qaabada doorashada Guddoonka Golaha Shacabka oo ka kooban 10 xubnood oo ka soo kala jeeda shanta beelood, kuwaasoo kala ah:
Guddigan ayaa maalinta Berri yeelanaya kulankoodii u horreeyay oo ay uga arrinsanayaan howlaha qaban qaabada doorashada Guddoonka.
WARARKA MAANTA 14ka Abriil 2022
Su’aalaha Maanta: Maxaa ka fahanteen dhaarinta Baarlamaanka 11naad ee maanta lagu dhaariyey #Muqdiso maanta? Maxaad ka ogtahay inay si deg deg ah u soo dooran doonaan guddoonka barlamaanka iyo madaxweyne cusub? Yaa beenta iyo fashilka Madaxweyne Farmaajo qarin doona? Yaa #Soomaaliya Madaxweyne ka noqon doona Raysal Wasaare Mudane Maxamed Xuseen Rooble ama Madaaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo “Been-Hawaas”? Maxaa fashilay in uusan dhicin wax afgabi ah? Yaase masuul ka noqon doona doorashada iyo qabashadeeda? Yaa tanaasuli doona oo masuul ka noqon doona fashilka iyo hoggaan xummada ka dhex jirta dowladda wakhtiga ku dhammaatay Madaxweyne Farmaajo? Ha wiqleyso!
Muqdisho 14ka Abriil 2022 Xildhibaanada diiday inay shahaadaqaataan kuma koobna kaliya kuwa maamulka Koonfur Galbeed, oo uu ka hor-istaagay madaxweyne goboleedkooda Cabdicasiis Lafta-gareen.
Muqdisho 14ka Abriil 2022 Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka baarlamaankii 11-aad, Cabdikariim Cabdi Buux ayaa caawa soo saaray fariin war-gelin ah oo ku socota xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad.
Fariintaan ayaa xildhibaanada loogu sheegay inay 9:30 AM oo barqanimo isugu yimaadaan dugsiga tababarrada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye.
“Beri hadii ilaahay yiraahdo xildhibaanka oo wata aqoonsigiisaa waxuu imaanayaa akadamiyada tababarka Ciidanka Booliska ee Generaal Kaahiye (police academy) saacadu markay tahay 9:30 aroornimo.”
Xildhibaanada ayaa lagu war-geliyey in halkaas basas looga qaadayo, si loo geeyo teendhada Afisyooni oo dhaarintu ay ka dhaceyso, sidoo kale gaadiidka iyo ilaalada ayaa loo sheegay xildhibaanada inay uga taganayaan gudaha Jeneraal Kaahiye.
“Halkaa ayaa basas looga qaadayaa Xildhibaanada oo lagu geynayaa Teendhada Afasiyooni oo ah goobta xaflada dhaarintu ka dhacayso. Baabuurtiina iyo askartiin waxaa uga tageysaan barxada Dusiga tababarka Booliska ee Genaral Kaahiye,” ayaa lagu yiri war-gelintaan.
Sidoo kale xildhibaanada degan gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa lagu war-geliyey in saacadaas ay yimaadaan saldhiga garoonka, halkaas oo ayagana loogu diyaariyey gaadiidkii qaadi lahaa oo lagu geyn lahaa xarunta ay dhaarintu ka dhaceyso ee Afisyooni.
Muqdisho 14ka Abriil 2022 Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalay fasaxay kuraasta kala ah HOP204 iyo HOP103, oo laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed, sida lagu shaaciyey shir jaraa’id oo Baydhaba ay ku qabteen xubnihii guddiga ee maanta tegay.
Hase yeeshee agaasime ku-xigeenkii hore ee hay’adda NISA Cabdisalaan Guuleed ayaa sheegay in sababta loo heysto kursigaasi ay tahay mid siyaasadeed, isaga oo soo bandhigay tusaale muujinaya inaanu shaqo ku laheyn kursiga Ikraan.“Fahad wuxuu la mid yahay, haddii lagu eedeynayo kiiskii Ikraan Tahliil iyo eedeymaha kale oo ay dad badan ku soo oogeen, wuxuu la mid yahay Yaasiin Farey oo ah ku simaha taliyaha NISA, wuxuu la mid yahay Kulane Jiis, dad badan oo waxaa jira ah eedeysanayaal ay kiisas ka yaallaan maxkamadda, oo aan ilaa iyo hadda la beri yeelin. Marka haddii ay arrintaas la xiriirto kuwan laftigooda ma aysan ahayn inay soo gudbaana” ayuu yiri Cabdisalaan.
Beledweyne 14ka Abriil 2022 Allaha ha u naxariistee waxaa caawa magaalada Beledweyne lagu dilay guddoomiyihii hore ee waxbarashada maamulka gobolka Hiiraan Cusmaan Caato.
Dilka Marxuumka ayaa ka dhacay xaafadda Dhagaxjebis ee magaalada Beledweyne, waxaana goobta isaga baxsaday kooxdii bistooladaha ku hubeysneed ee dishay guddoomiyaha.
Ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa caawa xaafado badan oo ka tirsan magaalada ka bilaabay howlgallo lagu baacsanayo kooxdii dilka geysatay.
Allaha u naxariistee Cusmaan Caato ayaa seddax bilood ka hor laga qaaday xilkii guddoomiyaha waxbarashada ee maamulka gobolka Hiiraan.
Sidoo kale dadka yaqaanay Cusmaan waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoonyahan ah oo caan ka ahaa gobolka Hiiraan, waxayna mudooyinkaan dadka reer Beledweyne dareemayaan amni darro xoog leh.
Muqdisho 14ka Abriil 2022 Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa caawa fasaxay kuraasta kala ah HOP204 iyo HOP103, oo laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed, sida lagu shaaciyey shir jaraa’id oo Baydhaba ay ku qabteen xubnihii guddiga ee maanta tegay.
Muqdisho 14ka Abriil 2022 Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta ka dhacayesa munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, taas oo soo martay is jiid jiid dheer iyo murano soo kala dhexgalay guddiga FEIT iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.
Munaasabadda ayaa lagu wadaa in goordhow ay ka bilaabato Teendhada Afisyooni, halkaas oo ay isugu tegi doonaan xildhibaanada cusub.
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, iyada oo la xiray dhammaan waddooyinka gala Dugsiga Tababarka Booliska Soomaaliyeed illaa iyo Afisyooni oo la dhigay ciidamo dheeraad ah.
Illaa iyo hadda waxaa shahaadada qaatay in ka badan 200 oo xildhibaan, kuwaas oo si wadajir ah loogu dhaarinayo baarlamaanka 11-aad ee dalka.
Sidoo kale waxaa xal laga gaaray tabashadii Koonfur Galbeed, kadib markii guddiga FEIT uu fasaxay kuraastii laga hakiyey maamulkaasi, waxaana xildhibaanada kasoo baxay Koonfur Galbeed ay qayb ka noqon doonaan dhaarinta.
Ra’iisul wasaare Rooble iyo FEIT oo garab ka helaya Beesha Caalamka ayaa ku adkeystay qabashada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal, si looga gudbo xaaladda adag ee kala guurka ah.Si kastaba, munaasabaddan ayaa muhiim u ah dhammeystirka doorashooyinkanSoomaaliya oo marar badan dib u dhacday, taas oo qaadatay muddo ka badan sanad dheeraad.